တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: တမ်းတဖွဲ့ (ပိုဒ်စုံရတု)
Posted by မေဓာဝီ at 10:59 AM
i wanna write like this.u r good author.
ama, can i ask one Q ?
မေရေ...တော်ရုံလူမရေးနိုင်တဲ့ ပိုဒ်စုံရတုလေးကို ရွတ်ဆိုခံစားရင်း မြန်မာစာရေးဆရာကောင်းမေ့ကို ပိုလေးစားမိပါတယ်။ ရတုလေးက တကယ့်ခံစားချက်ဆိုရင် ချစ်သူနဲ့အမြန်ဆုံးနီးဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။
ညည်း.. ပက်လက်လှန်။ ။
စိတ္တဇ ဝေဒနာ.. အဖြစ်ပြောင်းပါလို့…
အခုရရန် စိတ်မှာစွဲ။ ။
(မေသင်္ကြန်..ရယ်..) ညည်း… ဟာကကွဲ… အဲ..ဟုတ်ပါဝူး… လွဲ…။ ။ … :P
(ကာရန်အယူအဆ ကွဲလွဲပုံကိုဆိုလိုသည်.. ဥပမာ.. ၍..ဤ..၌..သည်..နှင့်..ကို.. စသည်တို့ကို ရှေးသူဟောင်းတို့က
ကာရန်အဖြစ်ယူမစပ်ရဟု မှတ်သားဖူးပါသည်… ဦးကျော့က `၍-ဤ-၌-သည်-ကို မှာ.. သဒ္ဒါကိုမှတ်စွဲ..အဓိပ္ပါယ်တယ်မလွဲစေနှင့်..
ကြံခဲ၍စပ်ပါ` ဟုဆိုခဲ့သလို.. အချုပ်တန်းဆရာဖေကလည်း `သည်-နှင့်-ကို သဒ္ဒါနည်းသာပ.. ကွာမလှည်း ပုဒ်ဗျည်းမျှသာ` ဟုဆိုခဲ့လေသည်… စာရေးဆရာမကိုပြောရတာ.. နွားရှေ့ထွန်ကျူးသလိုဖြစ်နေပီ.. အနော်က.. `ထွန်` နော်.. ဟဲဟဲ.. :P )
စကားချပ်။ ။ ယခုကဲ့သို့ ရှေးနည်းအတိုင်း ရတုကဗျာ.. ပျို့လင်္ကာ ဖွဲ့ဆိုသူများမှာ ဒီကနေ့ခေတ်၌ မရှိသလောက်ပင်ရှား၏။
နည်းနာ..ဥပဒေသ..စည်းမျဉ်းအတိုင်း လိုက်နာစပ်ဆိုရသောကြောင့်.. တင်းကြပ်လွန်းသည်ဟုဆိုကာ လေ့လာရမှာ ပျင်းကြောထူလှသဖြင့် ဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်များမှာ.. ဘာကာရန်စည်းမျဉ်းမှ မလိုသော မော်ဒန်စတိုင်နောက်သို့
တကောက်ကောက်လိုက်နေကြလေသည်… မြန်မာ့မူဟန် စာပေဟန်ကိုမပျောက်ပျက်အောင် ကျနော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များမှလည်း လေ့လာဆည်းပူးထိမ်းသိမ်းသင့်ပေကြောင်း… ယခုမေကဲ့သို့..
စာပေ၀ါသနာအိုးမျိုးမှာ မရှိသလောက်ရှားလှပါသဖြင့်… မေ့..အားချီုးကျူး၏။ လေးစား၏။ ဆက်လက်ကြိုးစားသွားရန် အစဉ်သဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေး၏။ ရတုကဗျာ..ပျို့လင်္ကာနှင့်..သာသည်သီချင်း..အဲစောင်းညှင်းကို.. မပြတ်လေ့ကျက်.. တီးမှုတ်လျက်သာ.. နေကောင်းစွာ………. ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ..။
အရမ်းကြိုက်ပါတယ် မမေ .. ထပ်ရေးဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။ အားပေးလျက်ပါခင်ဗျာ .. ဒီလိုရေးတဲ့လူမှ မရှိရင် မြန်မာ့စာပေ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ ဂန္တ၀င်ကဗျာရေးနည်းပုံစံတွေ ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိမ်ကောသွားပါလိမ့်မယ် ..
philtre ရေးထားတဲ့ လေးချိုးလေးကလည်း ကောင်းပါဘိသနဲ့ .. ချီးကျူးလေးစားပါတယ်ဗျာ
kohtet(Chasing Technology) said...
တကယ့်ကို သဘောကျ မိပါတယ်...
ဖုံဖုံခက်ဖြင့် ဆွေးသတည်း။ :D